इन्स्टाग्राममा सब भन्दा प्रसिद्ध स्पेनिश संग्रहालयहरू - एक अवश्य हेर्नुहोस् यात्रा समाचार
हामीले गरेको प्रत्येक यात्रामा, हेर्नुपर्दछ मध्ये एक एकले हामीलाई कलाको रमाईलो बनाउँछ। कहिलेकाँही हामीले यसलाई याद गर्दैनौं र सत्य यो हो कि हामीले हाम्रो जीवनहरूको लागि केही क्षणको मूल्यहीन मूल्य गुमाइरहेका छौं। तसर्थ, यो प्रत्येक र प्रत्येकलाई जान्न लायक छ सब भन्दा प्रसिद्ध स्पेनिश संग्रहालयहरु, र त्यो हामीले भविष्यमा एस्केडेसमा पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ।
एक पटक तिनीहरूमा, हामी कठोरताको फोटो लिन सक्छौं र यसलाई हाम्रा सबै अनुयायीहरूसँग साझा गर्न सक्छौं इन्स्टाग्राम मार्फत। केहि एक महान दिनचर्या भएको छ कि! विशेष गरी जब यो छवि अनन्त 'ह्यासट्यागहरू' द्वारा पछ्याईन्छ, ताकि यस तरिकाले यसको प्रख्यातता बढि व्यक्तिहरूमा पुग्न सक्दछ। योसँग र विशेष पोर्टलि होलिदुको साथ धन्यवाद, यो पत्ता लगाउन सम्भव भएको छ जुन सबैभन्दा प्रसिद्ध स्पेनिश संग्रहालयहरू हुन्। के तपाइँसँग नहेरी कुनै बाँकी छ?
1 इन्स्टाग्राममा सब भन्दा प्रसिद्ध स्पेनिश संग्रहालयहरू: बार्सिलोनाको समकालीन कला संग्रहालय
2 माद्रिदमा प्राडो संग्रहालय
3 बिलबाओमा गुग्नेहेम संग्रहालय
4 रेना सोफिया म्याड्रिडको संग्रहालय
5 थिस्सेन-बोर्नेमिज़ाजा संग्रहालय
6 गिरोना मा Dalí संग्रहालय
7 Andalusian समकालीन कला को केन्द्र
8 Institut Valencià d´Art आधुनिक
9 'आर्टियम', बास्क सेन्टर-समकालीन कलाको संग्रहालय
10 बार्सिलोना मा पिकासो संग्रहालय
इन्स्टाग्राममा सब भन्दा प्रसिद्ध स्पेनिश संग्रहालयहरू: बार्सिलोनाको समकालीन कला संग्रहालय
यो इन्स्टाग्राम मार्फत सबैभन्दा प्रसिद्ध संग्रहालयको रूपमा छ। यो किनभने यो १ mentioned147२ उल्लेख सहित कुल उल्लेख गरिएको स्थान मध्ये एक हो। हाम्रो देशमा कुञ्जी स्थानको लागि उच्च रकम। यसमा हामी कलाका कामहरू फेला पार्नेछौं जुन २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा सम्बन्धित छ। उनीहरु १5.० देखि आज सम्म 000००० भन्दा बढी कामहरूजहाँ युरोपियन पप शैली ant० को दशकको साथसाथै 60० को दशकमा व्याप्त अवन्त-गार्डे शैलीहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। यदि तपाईं यसलाई भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ भने, 'एल रावल' छरछिमेकमा त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। 'म्याकबीए' को रूपमा पनि परिचित, यसलाई राष्ट्रिय चासोको संग्रहालय घोषित गरिएको छ। पोर्टल अनुसार होलिडू, इन्स्टाग्राममा सब भन्दा सामान्य फोटोहरू अब यो संग्रहालयको भित्र लिइएको छैन, तर यसको बाहिरी घेरामा। 'स्केट' सबै प्रेमीहरूको लागि एक उत्तम क्षेत्र।
माद्रिदमा प्राडो संग्रहालय
हामीलाई थाहा छ यदि हामी सबैभन्दा प्रसिद्ध स्पेनिश संग्रहालयहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने प्राडो संग्रहालय यस सूचीमा हुनुपर्दछ। यो स्पेनमा मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। मोटामोटी रूपमा, यो भन्न सकिन्छ कि यो १th औं र १ th औं शताब्दी देखि काम गर्दछ। यहाँ हामी आनन्द लिनेछौं गोयाका साथै Velquezquez वा El Greco द्वारा काम गर्दछ, बोस्कोलाई नबिर्सनुहोस्, जसको संग्रह सबैभन्दा पूर्ण हो। यदि यस स muse्ग्रहालयको महत्त्व एकै वाक्यमा जोड्न सकिन्छ भने यो हाम्रो संस्कृतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान हुनेछ। तर इन्स्टाग्राममा फर्केर हेर्दा त्यहाँ जम्मा ११,,,,,,। रहेको छ, 'लास मेनिनास' सामाजिक नेटवर्कमा सबैभन्दा प्रख्यात कार्य हो। तपाईं यसलाई भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ, हप्तामा र बिहानको घण्टामा शान्त तरिकाले।
बिलबाओमा गुग्नेहेम संग्रहालय
यदि यो आफैमा पहिले नै महत्त्वपूर्ण छ भने, इन्स्टाग्राममा यो १०,००,००० भन्दा बढि उल्लेखहरूको साथ देखा पर्दछ। गुग्नेहेम संग्रहालय एक समकालीन कला संग्रहालय हो। सन् १ 100 1997 in मा यसको उद्घाटन गरियो र भवनको सबैभन्दा नवीन विचारलाई हाइलाइट गरियो जुन हामी पहिले प्रयोग गरिरहेको थियौं। थप रूपमा, यसले न्यू योर्कबाट काम गर्दछ साथै केही स pieces्ग्राहलयहरू जुन अन्य संग्रहालयहरूबाट लिएका छन्। प्रति वर्ष दस लाख भन्दा बढी बासिन्दाहरू, यस बिन्दुमा देख्न सकिन्छ र धेरैको लागि, यो पिल्ला मूर्ति विदेशबाट सबैभन्दा उल्लेख गरिएको मध्ये एक हो। सोमबार बन्द भएता पनि, बिहानको बाँकी दिनहरू त्यहाँ थोरै मानिस छन्, जसले हामीलाई अझ राम्रो तस्बिर लिनको लागि अनुमति दिनेछ।
रेना सोफिया म्याड्रिडको संग्रहालय
यो १ 1990 XNUMX ० मा थियो जब रेना सोफिया संग्रहालयको उद्घाटन भएको थियो। यसमा हामी २० औं शताब्दी र समकालीन कला पत्ता लगाउनेछौं। यो Atocha क्षेत्रमा अवस्थित छ र यसको सबैभन्दा लोकप्रिय काम हो पिकासो द्वारा 'गुरनिका'। तर यसको अतिरिक्त, त्यहाँ जोन मिरी वा साल्भाडोर डालाका महान कार्यहरू छन्, जसले म्याग्रेट वा अस्कर डोमेन्गुएजको अतुलनीय कलालाई बिर्सिएन। हामीले यसमा पत्ता लगाउन सक्ने सबैका लागि यो सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको संग्रहालयमध्ये एक भएको छ। कुनै पनि अगाडि नजाईकन २०१ 2016 मा यसले साढे तीन लाख भन्दा बढी भ्रमणका साथ आफ्नो ऐतिहासिक रेकर्ड तोड्यो।
यो संग्रहालयमा कलाकारहरूको नाम फिचर गरिएको छ जुन अरू ठाउँमा थिएन। तर यो मात्र होईन, तर तपाईले विभिन्न प्रदर्शन र गतिविधिहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ राखिएको संग्रह धेरै भिन्न छ, इटालियन रेनेसाँसदेखि रुबेन्स वा काराभागीओ मार्फत रेम्ब्रान्डको डच बारोक। दुबै रोकोको शैली र मनेटको यथार्थवाद र प्रभाववाद यस सामूहिक दृश्यमा एक साथ आउँदछ। जहाँसम्म धेरैको लागि, मुख्य कार्यहरू मध्ये एक हो 'बाथरूममा वुमन' रोइ लिक्टेन्स्टाइन द्वारा.
गिरोना मा Dalí संग्रहालय
यसको धेरै जसो चित्रकार साल्भाडोर डालाको काममा समर्पित छ। तपाईं यसलाई वर्गमा पाउनुहुनेछ गाला साल्भाडोर डाला, फिगुरासमा। तथ्या show्कले देखाउँदछ कि २०१ 2017 मा, यो तेस्रो सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको स्पेनी संग्रहालय थियो। यद्यपि यो सत्य हो कि सबै कार्यहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ, धेरै netizens का लागि, चित्रण गर्नको लागि छविहरू मध्ये एक हो उनीहरूको फ्याडेड। विशाल अण्डाले सजिएको टावरले धेरै ध्यान आकर्षण गर्छ र यसको उल्लेख १,15,००० भन्दा बढी हुन्छ।
Andalusian समकालीन कला को केन्द्र
जस्तो यसको नामले सts्केत गर्दछ, समकालीन कला यस ठाउँको मुख्य पात्र हुनेछ। यो सन् १ 19973since देखि सान्ता मारिया डे लास कुवेवासको मठमा अवस्थित छ। यसमा तपाईले कलाको 000००० भन्दा बढी कार्यहरूको मज्जा लिनुहुनेछ, यद्यपि धेरैको लागि, केवल भवन वा कार्टुजा मठ, यो सबै कला हो। यस कारणले गर्दा, प्राय: जसो छविहरू यस बाहिरी भागबाट हुनेछन्, तर यदि तपाईं पहिले नै यसमा हुनुहुन्छ भने, भित्र नहेर्नुहोस् किनकि यो सधैं सबैभन्दा बढी प्रशंसा गरिन्छ र यसले १ it,००० उल्लेख पनि गरेको छ।
Institut Valencià d´Art आधुनिक
२०१ In मा यो सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको स्पेनी संग्रहालयहरू मध्ये चौथो थियो। सबैभन्दा आधुनिक कला यसको अन्तिम टच थप्ने चार्ज हुनको लागि १ 2013 .1986 मा सिर्जना गरिएको हो। १००० भन्दा बढी कार्यहरू यसमा आधारित छन् २० औं शताब्दीको कला। यस बिन्दुमा तपाइँ दुबै पाठ्यक्रमहरू, कार्यशालाहरू र कन्सर्टहरू वा सम्मेलनहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुनेछ। सायद सबैभन्दा प्रशंसित प्रदर्शनहरू मध्ये एक एन्टेट मेसेजर हो।
'आर्टियम', बास्क सेन्टर-समकालीन कलाको संग्रहालय
बास्क कन्ट्री, अलाभामा हामी अर्को सबैभन्दा लोकप्रिय स्पेनिश संग्रहालय भेट्टाउँदछौं। भित्र, यसले २० औं २१ औं शताब्दीका बास्क र स्पेनिश दुबै काम गर्दछ। योसँग केहि अस्थायी प्रदर्शनहरू छन् र सँधै हालका विषयवस्तुहरूमा जोडिएका छन्। यसको २००२ मा उद्घाटन भयो र उनका सबै कार्यहरू बीच, मिकेल नावारो द्वारा मूर्तिकलाहरु। उनी १०,००० भन्दा बढी उल्लेखको लागि इन्स्टाग्राममा पनि प्रसिद्ध छ।
बार्सिलोना मा पिकासो संग्रहालय
त्यहाँ अधिक प्रतिभाशाली Picasso द्वारा ,,२०० भन्दा बढी कामहरू छन् जुन हामी यो ठाउँमा फेला पार्न सक्छौं। चित्रकारी मात्र होइन, मूर्तिकला, रेखाचित्र वा कुँदिएका सामग्रीहरूमा पनि। यो भन्न सकिन्छ कि यो एक धेरै पूर्ण संग्रह हो जुन अवस्थित छ। यो १4in200 मा सर्वसाधारणको लागि खोलियो र सम्भवतः नेटवर्कमा सबैभन्दा उल्लेखनीय हो 'पिकासोको पोर्ट्रेट' डगलस डंकन द्वारा। यदि तपाइँ यसमा इन्स्टाग्राममा भएका उल्लेखहरूको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यो भनिन्छ कि यो9660० को आसपास हो। के तपाइँ ती सबैलाई जानुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » आराम » इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा प्रसिद्ध स्पेनिश संग्रहालयहरू